Mahila Sahayatra Laghubitta Bittiya Sanstha Limited(Mahila Sahayatra Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
महिला सहयात्रा लघुवित्तको नाफामा उछाल, रिजर्भमा ९२.६१%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाफा उछाल आएको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको नाफा ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८५४.९१ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष संस्थाको नाफा ४६ लाख २ हजार रुपैयाँमा सीमित...
महिला सहयात्राले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आठौँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। संस्थाको हिजो मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आउँदो चैत १८ गते सभा डाकेको हो। सभा मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित अध्याय रिट्रिट रिर्सोटमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको चुक्तापुँजीको कुल...
महिला सहयात्राको नाफा १२४%ले बढ्यो, ईपीएस रु. ३४.४०
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १२४ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको ...
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडमा विलय हुन लागेको महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले शुक्रबार महिला सहयात्राको धितोपत्र कारोबार रोक्का गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली २०७३ बमोजिम...